Martisoor, Maanta iyo Wasiir Cabdiweli Xirsi Cabdulle Indhoguran (dhegayso) – Radio Daljir
Martisoor, Maanta iyo Wasiir Cabdiweli Xirsi Cabdulle Indhoguran (dhegayso)
Agoosto 24, 2017 2:20 g 1
Barnaamijka Martisoor ee maanta waxaa marti u ah Cabdiwali Xirsi Cabdulle Indhoguran, Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ee Dowladda PL, ahna khabiir wakhti dheer ku soo jiray arrimaha siyaasadda iyo ganacsiga, xilal kala duwanna ka soo qabtay maamulka PL iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya.
Wasiir Indhoguran ayaa barnaamijkan waxa uu si duragsan ugu falanqaynayaa arrimaha ganacsiga iyo siyaadda ee guud ahaan dalka, gaar ahaanna PL, siiba waxyaabaha u qabsoomay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee PL mudadii uu xilkan hayey iyo waxay ay hiigsanayso wakhtiga haray.
Waxaana uu wasiirku si gaar ah sharraxaad dheer uga bixinaya habka ay wasaaraddiisu u suuragalisay in 19 sano ka dib ay PL yeelato Tayodhowr dhanka badeecadaha ah iyo Kastam la doonayo in laga hirgaliyo xuduudda Puntland iyo DDSI ee aagga Goldogob, kaas oo furistiisa wakhti dheer la hadal hayey.
Taas ka sokowna Wasiir Indhoguran waxa uu odorosayaa aragtidiisa la xiriirta sababta ay Soomaaliya uga hanaqaadi la’dahay dawlad waxtar ah muddada rubuc qarniga ka badan ee dalku wajahayey daganaansho la’aan siyaasadeed iyo dagaalo ahli ah.
MARTISOOR 86 Wararka 26101
Ururka Ardeyda Puntland ee Boorame (dhegayso)
Garaad Faysal Jaamac 4 years ago
dee indhaguran phd miyaa waxkasta dad miyaa loo sheegin taas diidnay